Fanafihana mitam-piadiana: saika matin’ny fitsaram-bahoaka ny roa tamin’ireo jiolahy | NewsMada
Fanafihana mitam-piadiana: saika matin’ny fitsaram-bahoaka ny roa tamin’ireo jiolahy
Andian-jiolahy maromaro nanafika tokantranona mpamongady enta-madinika tao Ambohangsoa Port-bergé. Naratra mafy ireo tompon-trano, jiolahy roa kosa matin’ny fitsaram-bahoaka taorian’ny nisamborana azy. Lehilahy roa hafa kosa voasambotry ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona.
Tsy milamina ny tany. Nitrangana fanafihana mitam-basy ny tokantranona mpamongady iray ao Boriziny, ny harivan’ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany. Andian-jiolahy miisa efatra nirongo basy poleta sy basy vita gasy niditra tao amin’ireo tompon-trano tao amin’ny fokontany Ambohangisoa. Nandrahona sy nampitahotra ireo tompon-trano ireo olon-dratsy telo lahy. « Nokapohin’izy ireo tamin’ny vodibasy indroa ny lohan’ilay raim-pianakaviana 60 taona. Raha voavelin’ny barre à pince kosa ny ramatoa vadiny sy ny zanany vavy 20 taona», hoy ny fanazavan’ny polisim-pirenena, loharanom-baovao. Vokany, lasan’ireo jiolahy ny vola mitentina 2 400 000Ar sy ny finday miisa efatra. Taorian’izay kosa nandositra ireo jiolahy, saingy nisy nahatsikaritra ny lalany.
Vantany vao nitsoaka ireo olon-dratsy, niantso ny mpitandro filaminana ny mpifanolo-bodirindrina amin’ireo voatafika. Tonga teny an-toerana, araka izany, ny polisy sy ny zandary. Raikitra ihany koa ny fanarahan-dia sy ny savahao an’ireo olon-dratsy noho ny firaisan-kina teo amin’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana. Vokany, tratran’ny fokonolona ny jiolahy miisa roa tamin’ireo mpanafika. Sarona tao amin’ny fokontany Tsarasaotra ny tovolahy 26 taona. Raha tratra tao an-tranony tao Ambongisoa koa ny lehilahy iray 28 taona. Hita tao ambany fandrianany ny basy iray vita gasy nampiasaina tamin’ny fanafihana. Tranga izay nampihetsika ny hambom-pon’ny fokonolona ka novelesin’ireo nahasambotra azy ny lohan’izy roa lahy, izay antony nitarika ny fahafatesany. Ny lehilahy roa hafa kosa voasambotry ny polisy nampian’ny fokonolona teo amin’ny fokontany Tsarasaotra akaikin’ny CEG, naterina teny amin’ny kaomisarian’i Boriziny. Taorian’ny fisamborana azy efa-dahy, tafaverina ireo finday lasan’ireo jiolahy. Ireo fokonolona kosa mbola nitaky ny hamoahana ny ireo roa lahy voasambotra.
Hita teny amin’ireo olon-dratsy azo sam-belona ny basy vita basy niaraka tamin’ny « calibre 12 ». Teo koa ny basy poleta vita gasy miaraka amin’ny bala tena izy 12 isa. « Jiolahy roa hafa naman’ireo efa voasambotra sy ireo namoy ny ainy kosa tafaporitsaka », hoy ny loharanom-baovao iray hafa. Handrasana ny tohin’ny raharaha.